Ekpere nke Onye ọka ikpe ziri ezi. ? Katọlik mbụ na mmadụ
Ekpere Mkpere Onye Ikpe Ziri Ezi Ọ bụ ya ka a na-agwa Onyenwe anyị Jizọs Kraịst naanị onye ikpe anyị n’ihu Chineke Nna.
Ọ dị mkpa ịmara na a ga-emerịrị ekpere site n’ikwere.
Okwu Onye-nwe na-akuziri anyị na ọ bụrụ na anyị achọọ ya, anyị ga-ekwenye na ọ ga-ege ntị na ntị anyị, nke a bụkwa ihe nzuzo nke ihe a niile, ikwere.
Na enweghị okwukwe nke a ekpere ha bu nání okwu efu nke nādighi imu ihe ọ bula ma ghara imezu ebumnuche nke emere ha.
Maka ihe a niile, ọ dị mkpa ịmata ihe bụ isi kpatara anyị ji ekpe ekpere, ọtụtụ mmadụ na-ajụ onye ọka ikpe ikpe naanị site n'omume mana ọ bụghị site n'obi wee kpee ekpere anaghịzi arụ ọrụ.
1 Gini bu Ekpere nke Onyeikpe Kwuru?
1.1 Ekpere nke ezigbo onye ọka iwu Katọlik
1.2 Ekpere nye onye ikpe ikpe maka mmadụ
1.3 Ekpere naanị ikpe ikpe ịhapụ onye mkpọrọ
1.4 Ekpere nke onye ikpe mara maka ikpe siri ike
2 Kedụ mgbe m nwere ike ikpe ekpere?
Gini bu Ekpere nke Onyeikpe Kwuru?
Mazi. Jesucristo Ọ bụ enyi anyị, nwanne anyị na Onye ikpe anyị dị ikpe.
A na-arịọ ya maka ọtụtụ ihe na otu n'ime arịrịọ ndị a na-ahụkarị bụ maka nchebe maka anyị na ezinụlọ anyị.
Ọtụtụ Ndị Kraịst na-ekpe ekpere a kwa ụbọchị na nke a ga-abụrịrị n'ihi na ụbọchị ọ bụla ihe ọjọ na-achọsi ike, ọ dịkwa mma ịhapụ ụlọ mgbe niile site na nchedo nke Onyeikpe Ekpe ikpe banyere onye ọ bụla n’ime anyị.
Nke a bụ ekpere nke si n’obi site na mgbe anyị tinyere n’aka gị ihe kacha nso anyị nwere nke bụ ụmụaka na ezinụlọ anyị n’ozuzu ha.
Mee ekpere a tupu ịmalite njem ụbọchị, ya na ezinụlọ gị dum n'ụtụtụ Ọ bụ ezigbo echiche ebe anyi n’eme ka omume nke idi na ezi na ezin’ulo anyi n’emezu ihe okwu Die soque kwuru ma oburu na mmadu abuo ma obu ato kwekorita ma juo Nnam n’aha Jisos, o gha aju ajuju si n’eluigwe.
Ekpere nke ezigbo onye ọka iwu Katọlik
Oh Onye Chukwu na ikpe ikpe n ’i setiri aka gị nye ndị ogbenye na ndị aka ji akụ!
Onye hụrụ mgbe mgbaghara mmehie na ọrụ ebere, ìhè ime mmụọ nke na-amụkwasị ụzọ ndị kachasị njọ, Okwu nke ndụ na ịhụnanya miri emi, Ozizi na akaebe na-enye anyị nri ekpere.
Gị onye tara ahụhụ ma kparịa ya kachasị njọ, na ịdị nsọ na nke dị ọcha nabatara obi umeala ntaramahụhụ kacha njọ, Gị onye ịbụ eze nke ndị eze, onye na-adị ndụ ma na-achị ihe ọjọọ niile na mmadụ niile, anabatabeghị na-enweghị ntamu ma ọ bụ na-akọcha. Ọrịa na-afụ ụfụ, ị nyekwara ihe niile maka nzọpụta anyị, Kpee ekpere na arịrịọ anyị bịakwute gị.
Ndi muo ojoo ndi nwere ike gbapuwo n'ike nke ekpere, I mere ka ndi oria si n’elu akwa ha, I mere ka ndi kpuru ìsì kpuo ìsì ha, I weghachiri ndi ekpenta ahu aru, I nyekwara ndi soro gi ndu na nri.
I mere ka azù na ogbe bara uba inye ya igwe mmadu, I meghere mmiri ma gafere ha, I nyere ubochi na abali, Udo na nkwekorita, Gi Onye ikpe anyi n’ekpeghi azu, I ghaghi inye ndi gi onu, n’enyeghi oke. I mezuru nkwa gị, Mgbe onye na-efe ofufe bịakwutere gị, not dịghị eweda mmadụ ala ma ọ bụ gharia ala, do dịghị emejọ ma ọ bụ merụọ ahụ, teach na-ezi anyị ihe atụ, leave na-ahapụrụ ihe nketa ebighi ebi n’ime Akwụkwọ Nsọ, listen na-anụ ekpere anyị, ị ga-enweta ihu ọma anyị.
Ekpere bu uzo obula iji bulie elu, na mgbakwunye na aririo anyi, otuto anyi na ekele diri Chineke onye n’enye anyi na ndi ezi na ulo anyi ncheta ubochi niile.
N’ekpere a, anyi ma mara ma chekwaa na nchekwa nke Chineke na-aga n’ihu anyị n’ihe niile anyị na-eme n’ụbọchị ahụ.
Ufọkabasi Catholic nwere ụdị ekpere maka onyeikpe ikpe ziri ezi, n'ụdị atụ a nke ekpere anyị hụrụ na anyị bido site n’ịghọta njirimara niile nke Jizọs Kraịst ma mechaa rịọ arịrịọ ma mechie site n’ịkele amara ahụ, nke ikpeazụ a bụ omume okwukwe na-atụkwasị obi na Arụlarị ọrụ ebube ahụ.
Ekpere nye onye ikpe ikpe maka mmadụ
Anụ ọhịa gbara m gburugburu, ọdụm ndị na-ebigbọ ebigbọ, Ọjọọ na-emeri n'akụkụ m, Enwere m ụjọ na nhụjuanya. Anaghịzi m enwe ike ịga ije, ana m atụ egwu ikpe na-ezighị ezi,
Ndi nariesmegidem emee ihe ọchị, Ha kwenyere na ha nwere ike, Ma obu ezie na ujo m putara, Onye di elu karie, Onye n’eyere m aka.
Kpee ikpe, bia, biakutem ọsọsọ, kpochapu ihe ọjọ nile, Ndi ozo bu imegide m ma mekpa m aru, Onye ikpe mara, bia, biakutem ọsọsọ.
M na-eti mkpu, achọkwara ọnụnọ gị na ndụ m, abụ m nwoke na-esighị ike, achọ m gị ma enweghị m ike ịchọta gị, Bịa, bịanụ Onyeikpe m hụrụ n'anya.
Mee anwansi na ihe ojo, Oru anwansi a na ndi oria, Ka ekwensu na onye mmehie, Kpoo isi gi, si n’akuku m bia, Gbapu ngwa ngwa, Onye ikpe bia nyere m aka, m juo gi.
Obi na udo na-abịa, Menmụ nwoke ga-eto ma na-asọpụrụ Aha nsọ gị, Daalụ, a na m enye gị onye ikpe m dị mma, na-ekele gị ebighi ebi, Hallelujah, Amen.
Ekpere a kapịrị ọnụ dị n'ihi ogo nke ihe ike a na-enwe n’oge na-adịbeghị anya, ọ bụ ihe siri ike ịga n’okporo ụzọ n’ụbọchị ọbụla ma ghara ịghọta ọnọdụ ikuku nke ike.
Ọ bụ ya mere ekpere a ji dị oke mkpa ka anyị na-arịọ Onyeikpe ikpe ziri ezi ka ọ weta udo na ịdị nwayọ n’obi mmadụ ka ime ihe ike kwụsị n’ụzọ a.
Naanị ezi obi nke Jizọs Kraịst nwere ike ịgbanwe obi ka ọ bụrụ ezi na ebumnuche dị mma rue ngọzi.
Nd mma ka akwusi mmegbu na ime ihe ike karia ekpere juputara n’okwukwe, ezi ebumnuche, n’enweghi obi ojoo ma mee nkpuru obi.
Ekpere naanị ikpe ikpe ịhapụ onye mkpọrọ
Ezigbo Onyenwe anyị Jizọs. A mụrụ gị n’efu.
Mmụọ gị nke pụrụ ime mmụọ nweere onwe ya, ọbụlagodi na ahụ gị adịghị ahụ.
Onye ahụ Ya na ọnụnọ nke Chineke dị n’ime gị, na - eso gị mgbe niile.A na - akpọku m ọnụnọ mmụọ ahụ n’ime gị ma na - arịọ gị ka ị hapụ gị, nnwere onwe nke kwekọrọ n’ihe niile dị ndụ site na ikike nke akọ na uche.
Abụ m ọnụ ụzọ emegheghị nke mmadụ ọ bụla nwere ike ịbịaru m nso, ọnụ ụzọ ahụ na - eduga gị n'udo, n'ịhụnanya nke Chineke na onye agbata obi gị, maka ịdị mma na obi ụtọ gị, ga - emeghe n'ezoghị ọnụ, ugbu a na Ruo mgbe ebighi ebi.
Ikpe a mara ikpe zuru oke ka ahapụ onye mkpọrọ siri ezigbo ike.
Iso onye ezin’ulo ma ọ bụ enyi gị biri ugbu a jọrọ njọ bụ otu n’ime ahụmahụ kachasị njọ ị nwere ike ịnagide.
Maka ndị a napụrụghị nnwere onwe bụ usoro ihe mgbu nke ọtụtụ oge ekpere bụ naanị nke nwere ike inye udo na olileanya.
A na-ajụ Onye ọka ikpe Jizọs Kraịst ziri ezi ka e wee tụgharịa uche na mkpebi ndị metụtara ikpe a, ka e meghee nghọta ma ọ nwere ike ịba n'akụkụ nke Ikpe Ziri Ezi.
N'otu ụzọ ahụ, a pụrụ ịgbatị arịrịọ ahụ iji rịọ obere udo na ndidi, na-anwa ime ihe okwu Chineke kwuru, na-arịọchitere onye agbata obi anyị arịrịọ.
Ekpere nke onye ikpe mara maka ikpe siri ike
Onye ikpe dị nsọ na onye dị ndụ nwụrụ anwụ, anwụ nke ebighi-ebi nke ikpe nkwụmọtọ, nke dị na afọ dị ọcha nke Nwa agbọghọ nwanyị amaghị nwanyị maka ahụike nke agbụrụ mmadụ.
Ezigbo Onyeikpe, onye kere eluigwe na ụwa ma nwụọ n’elu obe maka ịhụnanya m.
Gị, onye e kere n’ekpere ma tinye n’ili nke i siri na ya bilie n’ụbọchị nke atọ, onye meriri ọnwụ na site na oku mmuo. Naanị na Onyeikpe Chineke, nụrụ arịrịọ m, gee ntị n'arịrịọ m, myaa ntị n'arịrịọ m ma nye ha ezi ọziza.
Voiceda olu gị na-ezighi ezi mere ka ebili mmiri ahụ daa, gwọọ ndị ọrịa ma kpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ dị ka Lazarọs na nwa nwanyị nwanyị Neim.
Ala eze nke olu gi gbapuru ndi mo ojoo, mee ka ha hapu aru nke ndi nwere anya, nye ha ndi anya, nye ndi ogbi okwu, nuru ndi nti chiri ma gbaghara ndi mmehie, ndi Magdalene na ndi oria aru. site na ọdọ mmiri.
I mere onwe gị ka ndị iro gị ghara ịhụ gị anya, ndị gara mkpọrọ ka ị daa n'ala, mgbe ị nwụrụ n'elu obe, mkpịsị aka gị na-atụda egwu gị. Opened meghere Pita ụlọ mkpọrọ, kpọpụ ya na ha n'enweghị onye nche Herod.
Chebere Dimas ma gbaghara nwanyị akwụna ahụ.
Arịrịọ m m, Onyeikpe dị ikpe, napụta m n'aka ndị iro m niile, nke a na-ahụ anya na nke a na-adịghị ahụ anya: Nsọ nsọ nke ị kpuchitere kpuchie m, mkpuchi gị dị nsọ kpuchie m, mkpuchi nke kpuchie anya gị na-emechi ndị na-akpagbu m na ndị chọrọ m anya. Ihe ojoo, nwere anya ma ghara ihu m ka ụkwụ nwere ma adighi abiakute m, aka nwere ya ma nwaa m nti, nti nwere ya, ma anaghi achi m nti, ire a dighi eboro m ebubo ma egbugbere onu gi gbachi nkiti ikpe mgbe ha nwara ime m ihe ojoo.
Ewoo, Jizọs Kraịst Onyeikpe na Onyeikpe !, meere m ụdị nhụjuanya na ahụhụ, nkedo na nkwa, ma mee ka m kpọkuo gị, meekwa ka alaeze nke olu gị dị nsọ ma dị nsọ na-akpọ gị ka ị nyere m aka, ụlọ mkpọrọ mepere, agbụ. a na-agbaji njikọta ahụ, a na-ejikọkwa ọnụ ya na mkpanaka ya, a na-akụgharị mma agha na ngwa ọgụ ọ bụla nke na-emegide m ga-agbaze na-abaghị uru. Thenyịnya ndị ahụ eruteghị m, ndị nledo ahụ anaghịkwa ele m anya, ha achọtaghị m.
Ọbara gị na-asa m, uwe mgbokwasị kpuchie m, aka gị gọzie m, ike gị zoro m, obe gị gbachitere m ma bụrụ ọta m na ndụ na n'oge ọnwụ m.
Ekpe ikpe, Nwa nke Nna mgbe Ebighi-ebi, na Gị na mmụọ nsọ na ị bụ otu ezi Chineke!
Oh Okwu Chukwu mere mmadụ!
A na m arịọ gị ka ị kpuchie m nke uwe nke Atọ n’Ime Otu ma mee ka ị nwere onwe gị pụọ na nsogbu niile wee bulie Aha Nsọ gị.
Kpee ekpere nke Chineke na onye ikpe ikpe maka ikpe siri ike na nnukwu okwukwe!
Jesus Christ, ke ini enye okodude ke isọn̄, ama ọnọ nnennen nnennen aban̄a se uduak owo ekemede ndinam, enye ama ekere ke obụkidem esie ke ini enye ekebierede ndiyak uwem esie ọnọ ke ntak ima nnyịn.
Nke a bụ ihe kpatara na ọ dịghị onye ka ya mma na-aghọta usoro ndị siri ike, mara mmetụta anyị, ihe anyị na-eche ma na-eduzi anyị ime ihe ziri ezi ime ọbụlagodi na ọ bụghị nke doro anya n'oge ahụ.
O nweghi arịrịọ siri ike a na-agaghị edozi site n’ekpere nwere okwukwe siri ike, Chineke na-emezu nkwa ya mgbe niile.
Nwere ike ikpe ekpere onye ọka ikpe mgbe ọ bụla ịchọrọ.
O nweghi oge, nkeji, ubochi izu ma obu nhazi. You ga-ekpe ekpere oge ịchọrọ ya na oge ịchọrọ ya na okwukwe.